Firefox 92 yatotibvumidza kuti tishandure mapeji, asi chete kuChirungu | Linux Vakapindwa muropa
Muturikiri anoto shanda mu Firefox 92, asi chete kune mutauro mumwe
Pavakaparura Firefox 89, chimwe chezvinhu zvitsva zvakawanikwa muNightly (91) nyowani ndechekuti ivhu raive richitogadzirirwa kuitira kuti iro browser remakava rikwanise kududzira mapeji ewebhu natively. Muzuva rayo takariedza uye hatina kuona chero chinhu, hatina kukwanisa kuita basa rekuwedzera, asi zvinotoita sekunge rinogona kuvhurwa Firefox 92. Iyo yazvino vhezheni vhezheni ndeye makumi mapfumbamwe, saka kuchine mavhiki masere akasara kune izvo zviripo pane chiteshi usiku hwoga hwoga ona mwenje.
Kunge tinotsanangura wekupedzisira June, izvo zvatinofanirwa kuita kuti tione izvo zviri kuitika kuMozilla kuwana pamusoro: config uye maka se "nhema" sarudzo extensions.translations.disabled, nemusiyano mukuru uyo, mushure mekutanga patsva bhurawuza, ikozvino iyo mushanduri hongu zvinoonekwa. Inozviita zvakafanana nechero imwe bhurawuza matinoisa yekuwedzera kuti tishandure kana kuti yatounza nekutadza: inotiratidza bhawa kubva patinogona kuratidza kuti tinoda kududzira kana kwete uye nedzimwe sarudzo.
Firefox 92 iri kuuya munaGunyana
Dambudziko nderekuti, zvirinani mumiyedzo yangu, ini Ini handina kuwana nzira yekududzira muchiSpanish. Kana tikabaya "Dudziro", inotanga kushanda, chimwe chinhu chatisingakwanise kuti chinoita chinokurumidza, kushamisika kuti chinyorwa chakashandurwa chave muChirungu. Joke rinoshanda kune avo vasingazive iwo mutauro zvakare. Kana mumwe munhu akafunga maitiro ekuzviita, taura uye wedzera mhinduro kuchinyorwa.
Parizvino, chinhu chega chinobata pfungwa dzangu kune zvirinani chiratidzo chekuwedzera uye mifananidzo, chimwe chinhu izvozvi izvozvi tichava nenguva yekutarisisa nekuti, sezvatataura, zvinotora nguva yakareba kududzira mapeji kana tikazvienzanisa nemamwe mabhurawuza. Kana pakupedzisira vakasadzokera kumashure, mukana wekududzira unotanga kuwanikwa mushanduro yakagadzikana muFirefox 92 iyo inosvika muna Gunyana. Ndinovimba panguva iyoyo ndinoshandura muchiSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Muturikiri anoto shanda mu Firefox 92, asi chete kune mutauro mumwe
Nhau dzakanaka kwazvo, kana uchida
Kutanga, tsanangura kuti ipanda tsvuku uye kwete Fox, uye chechipiri, ndeipi injini yainoshandisa kushandura? kududzira asi hazvina kudaro
Handina chokwadi, asi kutarisa pazvirongwa zvinoti "Google." Iko kukosha kunogona kuchinjwa, asi ini handina chokwadi chekuti ichashanda nevamwe.
Chinhu pamusoro pemhuka "moto gava", ndokuti, "moto gava."
Ini ndinodzokorora Red Panda muiyi link inotaura nezvekuti ndiani akagadzira logo
https://hicks.design / journal / firefox-logo
Iyo firefox iri chaiyo tsvuku panda, asi zvaiita senge iwo mufananidzo chaiwo. Pfungwa chete yandakanga ndagadzira yandaifara nayo ndeiyi, yakafemerwa nemufananidzo weJapan wegava.
Naizvozvo, logo yacho yakavakirwa gava, uye yekutanga vhezheni yaive nemuswe wemoto.
X2Go: nyore nyore madhesiki pane yako GNU / Linux distro
Miswe 4.20 inosvika ine shanduko kune iyo Tor yekubatanidza maitiro, mapakeji ekuvandudza uye nezvimwe